Wardiileef dhamsoota filachuu
LibreOffice Calc tuuta durmurtaawwaa dhamsoota dhangeessuu kan wardiilee kee irratti raawwattu wajjin dhufa.
Dhamsoota gara Calc dabaluun hin danda'amu, kanaafuu fooyya'uu hin danda'an. Garuu, haalata isaanii erga wardiitti raawwattee booda fooyyeessuu dandeessa.
Osoo wardii dhamsaan hin dhangeessin dura, yoo xiqqaate haalata maadhee tokko maadheelee wardii irraatti raawwachuu qabda. Achiin dhangeessuu maadhee dhamsa qaaqa Filannoo Dhamsaa keessaa filachuu fi raawwachuu dandeessa.
Dhamsa wardiitti raawwachuu:
Sajoo Dhamsoota Filadhu kabala Meeshaalee keessaa filadhu.
Qaaqa Filannoo Dhamsaa keessatti, dhamsa kan wardii irratti raawwachuu barbaadde filadhu.
Akkuma dhamsa biraa qaaqa Filannoo Dhamsaa keessaa filatteen, amalootni haalata maamiloo keessaa muraasni wardii ammee irratti raawwatu. Fooyyeen battalumatti wardii kee keessatti mul'ata.
Dhangeessa ufmaa hammanga maadhee filatameetti raawwachuu
Title is: Wardiileef dhamsoota filachuu